Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A November 2010 (4)
Q and A November 2010 (4)
1. ဆက်ဆံပြီးတိုင်း နာနာနေလို့
2. မခွဲတာနဲ့ ခွဲတာ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းမလဲ
3. နားရောဂါ ခံစားနေရတာ
5. သွေးကြောထုံးတာလို့ ပြောပါတယ်
6. Metronidazole သောက်ဆေးက
7. ပေါင်ကြားက အရေပြားက ခဏခဏ
November 22, 2010 6:30 PM
အိမ်ထောင်သက် ၃နှစ်ရှိပါပြီခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က အသက် ၂၇ နှစ်နဲ့ အမျိုးသမီးက ၃၅ နှစ်ပါ။ အရင်က ဆက်ဆံပြီးရင် တစ်ခါတစ်လေမှ အမျိုးသမီးက ဗိုက်နာတတ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်း နာတာ စိတ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ နာတာက လေအောင့်သလို နာတတ်ပါသေးတယ်။ လေဆေး သောက်လိုက်ရင် ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ဆံပြီးတိုင်း နာတတ်ပါတယ်။ ရေနွေးအိပ် ကပ်ရပါတယ်။ နာတာကလဲ ဝမ်းဗိုက်တပြင်လုံး နာတာပါ။ နားနဲ့ကပ် နားထောင်ကြည့်ရင် အထဲမှာ လေသံတွေလို ကြားရတတ်ပါသေးတယ်။ နာပုံနာနည်းက လေနာသလို ဖြစ်ပေမယ့် ဆက်ဆံပြီးတိုင်း နာနာနေလို့ အတွေး ပွားစရာဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က (့) မှာ နေပါတယ်။ ကလေး မရနိုင်သေးလို့ ဒီက ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီး စမ်းသပ်မှုလေးတွေ လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို မေးရမလဲ။ မီးဖွားအထူးကုလား၊ သားအိမ်အထူးကုလား။
ဆန်းတော့ ခပ်ဆန်းဆန်းဘဲဗျ။ ဆက်ဆံပြီးနောက်မှ နာတာဆိုရင် ဆက်ဆံနေတုံးနာတာမျိုးနဲ့ မတူဘူး။ ဆက်ဆံနေချိန် နာတာဆိုရင် မွေးဖွါးလမ်းမှာ ပိုးတခုခုဝင်နေလို့ဖြစ်တယ်။ အခုက လေလို့ ထင်တာ ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချိန်မျိုးမှာ နာတာက နဲနဲဆန်းနေတယ်။ လေဆိုရင် ဒီအချိန်မဟုတ်ဘဲ ဆာချိန်၊ စားပြီးချိန်စဖြင့် နာမယ်။ နားနဲ့ကပ် နားထောင်လို့ လေသံကြားရတာတော့ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အစာအိမ်၊ အူတွေက အမြဲလိုလို လှုတ်ရှားနေတယ်။ အစာ စားပြီးချိန်နဲ့ ဝမ်းပျက်ချိန် ပိုများများ လှုတ်ရှားတယ်။
နာတာက အောင့်သလိုလား၊ ရစ်နာတာလား၊ ခန့်မှန်းခြေ ဘယ်နှစ်မိနစ်လောက် ကြာတတ်သလဲ။ ဝမ်း-လေ မှန်ပါသလား။ လေနာ မိသားစုရာဇဝင် ရှိသလား။
နောက် ကလေးမရတာက စိတ်အားတော့မပျက်ပါနဲ့။ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ ရှိရင်တော့ Fertility clinic ဆိုရင် အတိအကျဘဲ။ နောက်တမျိုးက OG သားဖွါးမီးယပ်အထူးကု။ စမ်းသပ်မှုတွေ အမျိုးမျိုးလုပ်ရတယ်။ Infertility ကလေးမရနိုင်ခြင်း ကို ဖတ်စေချင်တယ်။
23 Nov 10, 10:23
အဆီကျိတ်တွေက မခွဲတာနဲ့ ခွဲတာ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းမလဲဆရာ။
အဆီကျိတ် Lipoma or Cyst တွေကို ခွဲမှသာ ပျောက်ပါမယ်။ မခွဲသေးရင် ကြီးကြီးလာနိုင်တယ်။ ကြီးမှခွဲတော့ အနာကြီးမယ်။ ကြီးလာရင် သူ့အောက်ကို သွားဖိတာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကင်ဆာကို မပြောင်းပါ။
23 Nov 10, 14:00
ကျွန်တော်နားရောဂါ ခံစားနေရတာ ၂ လကျော် ၃ လလောက် ရှိပါပြီး။ ဆေးထည့် ဆေးသောက်တော့ပျောက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် နားအူးတာက ကျန်နေတယ်။ နားအူးတာ တစ်ခါတစ်ခါ နှလုံးတောင် ခုန်တယ်ဆရာ။
နားရောဂါဖြစ်တုံးက ဘယ်နေရာကို သွားထိသလဲ။ Ear drum နားစည်ခေါ်တာ မထိရင် ပြဿနာမကြီးပါ။
24 Nov 10, 19:03
ကျွန်တော့်အမေ ဇက်ကြောဘက်မှာ ကျီးပေါင်းတက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘယ်ဘက် မျက်လုံး အကြောတောင် လိုက်လာပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုကုသသင့်ပါသလဲ။ ဘယ်ဆေးရုံမှာ ကုသသင့်ပါသလဲဗျာ။ ကုန်ကျစရိတ်ကကော ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ။
ဖြစ်တဲ့သူ အသက်။ ဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ ဒီရောဂါနာမည်သိရတာလဲ။ ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။
24 Nov 10, 20:28
ကျွန်တော့် ခြေထောက်တကောက်ကွေးမှာ သွေးကြောကကြီးနေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ရပ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရလို့ သွေးကြောထုံးတာလို့ပြောပါတယ်။ တစ်ခါခါ ယားတက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကုသရပါမလည်းလို့ လမ်းညွန်ပေးပါအုံး ခင်ဗျား။
ဖြစ်တဲ့နေရာက ဘယ်လောက်များ-ကြီးသလဲ။ တကြောထဲလား။ များသလား။ ဖြစ်တဲ့သူ အသက်။
Varicose veins သွေးကြောထုံးခြင်း ကို ဖတ်ပါ။
25 Nov 10, 14:46
ဆရာရှင့် Metronidazole သောက်ဆေးက အစာနဲ့ နီး(သို့ )ဝေး ဘယ်လိုသောက်ရမယ်။ မတည့်သောအစာရှိရင် သိချင်ပါတယ်ရှင့်။
Metronidazole သောက်ဆေးကို အစာနဲ့နီးရင် ပျို့ချင်တာ၊ မူးချင်တာ သက်သာစေတယ်။ တချို့မှာ ထမင်းစား ပျက်တတ်တယ်။ ဆေးရပ်ရင် ပြန်ကောင်းပါတယ်။
25 Nov 10, 18:42
ကျွန်တော်ရဲ့ ပေါင်ကြားက အရေပြားက ခဏခဏ သူ့ အလိုလို ကွဲတယ်။ ၁ ပတ်လောက်နေရင် ပြန်ကောင်းသွားတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ ဘာဆေးကို စွဲသောက်ရမှာလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြု ဖြေကြားပေးပါ။ အများအားဖြင့်က ညာဘက်ပါ။ ၁ စင်တီခန့်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ လိင်တံ ထိပ်ဖျားက အရေပြားကလဲ သူ့ အလိုလို ကွဲတတ်ပါတယ်။ ၂ ပတ်ခန့် ကြာရင် သူ့ အလိုလို ကောင်းတတ်ပါတယ်။ စဖြစ်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ခန့်ကပါ။
အရေပြားကွဲတာ မမြင်ရဘဲ ပြောရရင် ဗီတာမင် အေ နဲ့ စီ သောက်ပါ။ အလှဆီစစ်စစ်လိမ်းပါ။ ဗီတာမင် အေ ကိုတနေ့ ၁ ကြိမ်၊ စီ ကို တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:27 PM